I-EPA isusa igama lesikhulu sase-US ekuxwayiseni ngezixhumanisi zomdlavuza we-glyphosate
Posted on July 16, 2020 by UCarey Gillam
(Vuselela ngencazelo ye-EPA)
Esenzweni esingajwayelekile, i-Environmental Protection Agency (i-EPA) isule igama lesikhulu sezempilo sase-US emazwini omphakathi axwayisa ngezixhumanisi zomdlavuza namakhemikhali okubulala ukhula i-glyphosate futhi afuna ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kocwaningo kwezimboni.
Ukuphawula komphakathi okukhulunywa ngakho kwathunyelwa ku-EPA futhi kwathunyelwa kuwebhusayithi yale nhlangano ngaphansi kwegama likaPatrick Breysse, umqondisi weNational Center for Environmental Health kanye ne-Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). I-ATSDR iyingxenye yoMnyango Wezempilo kanye Nezinsizakalo Zabantu e-US.
Ukuphawula ngaphansi kwegama likaBreysse kwafakwa nyakenye ne-EPA ukuphendula ukubuyekezwa kwe-ejensi ye-glyphosate futhi yanxusa inkampani ukuba ibuyekeze "ubufakazi obubhalwe phansi" bokuthi i-glyphosate iyingozi futhi kufanele ivinjelwe.
Kwaphela izinyanga ukuphawula kuhleli kuwebhusayithi ye-EPA ngaphansi kwegama likaBreysse. Kungemva kokuba i-US Right to Know ifune ukuphawula ngesonto eledlule kuBreysse mayelana nesitatimende sakhe lapho i-EPA yalisusa khona igama lakhe. Amazwana manje kuthiwa "Akaziwa," ngemuva kokuthi umqashi kaBreysse enqume ukuthi ayithunyelwanga yena uqobo, ngokusho kwe-EPA.
I-Glyphosate iyisithako esisebenzayo ku-Roundup nakwamanye ama-herbicides futhi yathandwa yi-Monsanto, iyunithi yeBayer AG. Kubhekwa njengekhambi elisetshenziswa kakhulu emhlabeni. Futhi ingenye yezimpikiswano enkulu futhi ingundabamlonyeni wamacala alethelwe amashumi ezinkulungwane zabantu abathi baba nomdlavuza ngenxa yokuchayeka ku-Roundup namanye ama-herbicides e-glyphosate enziwe yiMonsanto.
I-EPA ivikele ngokuqinile ukuphepha kwe-glyphosate yize kutholwe ososayensi abaningi abazimele ukuthi i-glyphosate herbicides ingadala ukugula nezifo ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-non-Hodgkin lymphoma.
Ukuphawula ngaphansi kwegama likaBreysse kuphikisana nesimo se-EPA:
“Ucwaningo oluningi luxhumanise ukusetshenziswa kwalo nokwanda kwama-lymphomas, futhi sekuyisikhathi sokuthi siyeke ukuvumela imboni yamakhemikhali ukuthi isebenzise ucwaningo ukuze izisebenzele yona. Izakhamizi zase-US zidinga ukwethemba i-Environmental Protection Agency ukuthi izosebenzela thina, okusho ukuthi kukala ubufakazi obuthathwa emithonjeni yesayensi engathathi hlangothi.
Ngokuphawulekayo, uBreysse futhi uyisikhulu se-ATSDR esasikhona icindezelwe izikhulu ze-EPA e-2015 ngokuyalelwa yiMonsanto ukumisa ukubuyekezwa kobuthi be-glyphosate bese kuqhubeka i-ATSDR. Ukucindezela ukubambezela ukubuyekezwa kwe-ATSDR ye-glyphosate kweza ngoba uMonsanto wesaba ukuthi i-ATSDR izovumelana ne-International Agency for Research on Cancer (IARC) ekutholeni izixhumanisi zomdlavuza ku-glyphosate, imibukiso yangaphakathi yeMonsanto.
I-imeyili yangaphakathi yeMonsanto ithe isikhulu se-EPA uJess Rowland utshele uMonsanto kufanele "athole indondo" uma ephumelele ekubulaleni ukubuyekezwa kwe-ATSDR glyphosate.
Ukubuyekezwa kwe-ATSDR empeleni kubambezelekile kwaze kwaba yi-2019 ngemuva kwengcindezi evela ezikhulwini zeMonsanto ne-EPA. Lapho lo mbiko ekugcineni ukhishwa, waqinisekisa ukwesaba kukaMonsanto, ukuxhasa ukuxhaswa kwezinkinga ze-IARC zango-2015 mayelana nezixhumanisi phakathi komdlavuza ne-glyphosate. Umbiko we-ATSDR usayinwe nguBreysse.
Lapho ibuzwa ngokushintshwa kokunikezwa kokuphawula komphakathi, i-EPA yathi isuse igama likaBreysse ngemuva kweCenters for Disease Control and Prevention, eyengamele i-ATSDR, itshele i-EPA ukuthi ukuphawula akuzange kuthunyelwe nguBreysse futhi yacela ukuthi isuswe noma ihlelwe. Esikhundleni sokususa ukuphawula, i-EPA ikhethe ukugcina ukuphawula kudokodo kodwa yaguqula igama lalowo ohambise lo mbhalo ukuthi "ingaziwa."
I-EPA ithe ayihluzi noma iqinisekise imibono efakiwe.
Ihhovisi labezindaba leNational Center for Environmental Health nalo lithe uBreysse akazange afake le nkulumo okukhulunywa ngayo. UBreysse akazange aphendule esicelweni sokuqinisekisa noma ukuphika ukuthi ungumbhali wamazwana akwiwebhusayithi ye-EPA.
Ukuphawula kwangempela nalokhu okushintshiwe kuboniswe ngezansi:
Ukudla Okucatshangwayo ezolimo, I-ATSDR, Bayer, umdlavuza, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, I-GMO, ukhula, i-lymphoma, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, RoundUp, isayensi
Ukuguqula Ukudla Esikudlayo Nge-DowDuPont
Posted on February 13, 2018 by UStacy Malkan
Buyekeza i-2 / 26 / 18: Ekuphumeni okulandela ukuhlangana neDow, iDuPont Pioneer izoshintsha igama layo libe yiCorteva Agriscience; kusekelwe enhlanganisweni yamagama asho "inhliziyo" kanye "nemvelo." Nakhu ukuthatha kwethu.
Izinkampani ezinkulu kakhulu zokubulala izinambuzane kanye nembewu zifuna ukuthi ukholwe ukuthi zisohlangothini lwesayensi. Ukudla kobuchwepheshe obuphezulu kuyikusasa, bathi, futhi abantu abaphakamisa ukukhathazeka ngemithi yabo yokubulala izinambuzane kanye nembewu eyenziwe ngezakhi zofuzo "bayayiphikisa isayensi."
Umagazini i-Atlantic uzohlinzeka ngeqonga kulawo maphuzu okuxoxa embonini ngokushintshisana ngemali ezinkampani ngoFebhuwari 15 umcimbi enesihloko esithi, "Ukuvuna: Ukuguqula Ukudla Esikudlayo" exhaswe yiDowDuPont.
I-ajenda ye-fluff ine "abalimi, ama-foodies, o-techies kanye ne-tinkers" abadingida ukuthi ubuchwepheshe bamuva bokudla buyiguqula kanjani indlela esilima ngayo izilimo nezilwane, kanye nomthelela ekusaseni lokudla.
Ngabe omunye wabahlanganyeli uzobuza ukuthi kungani iDowDuPont kuqhubeka ukuphusha isibulala-zinambuzane esiyingozi yize sinamandla ubufakazi besayensi ukuthi kulimaza ubuchopho bezingane?
Ngabe omunye wabo uzobuza ukuthi kungani iDuPont kwahlanganisa izingozi zezempilo of ikhemikhali iTefon kuxhunyaniswe nezinkinga zokuzalwa, njengoba kwavumela ikhemikhali ukuthi lingcolise izindlela zamanzi emhlabeni wonke?
Ngabe bazobuza ukuthi kungani - ngaphandle kwenzuzo yerekhodi - iDowDupont inayo wenqabile ukusiza izisulu zenhlekelele noma uhlanze ukungcoliswa kwamakhemikhali okubangelwe yingozi yesitshalo semithi yokubulala izinambuzane ngo-1984 Bhopal?
Ngabe i-Atlantic ibizosingatha umcimbi "oguqula isimo sezulu" ne-ExxonMobil?
Yini elandelayo? Ngabe i-Atlantic izovuma ukusingatha umcimbi "wezempilo oguqukayo" oxhaswe nguPhillip Morris noma umcimbi "wokuguqula isimo sezulu" oxhaswe yi-ExxonMobil?
Kungenzeka. Ngo-2015, i-Atlantic Ingqungquthela Yezokudla yabhalwa ngu-Elanco, isigaba sika-Eli Lilly esenza i-ractopamine, ikhemikhali elikhuthaza ukukhula elisetshenziswa ekukhiqizeni inyama okuyi kuvinjelwe emazweni we-100 ngenxa yokukhathazeka kwezempilo, kepha isasetshenziswa lapha.
NjengoTom Philpott kubika kuMama Jones, UMongameli we-Elanco uJeff Simmons wethule inkulumo exhasiwe kulo mcimbi, lapho “akhononda khona ngokuthi iqembu aliqambe ngokuthi 'amaphesenti angu-1,' egqugquzela ukwandiswa komthetho ngabakhiqizi benyama, yilo eliqhuba impikiswano kazwelonke mayelana nokudla.”
Simmons ' Inkulumo yemizuzu engu-15 ifake i-video eshukumisayo yomama obefunda uhlelo lwe-Elanco / American Academy of Nutrition and Dietetics futhi wafunda “ngokubaluleka kwamaprotheni” nokudla inyama eningi njengendlela yokuthuthukisa impilo yomndeni wakhe.
Ukuthenga Ukulandisa Kokudla
I-Atlantic imboze okwedlule okungcolile kweDow / Union Carbide kepha manje isihlinzeka ngesembozo se-DowDuPont's PR spin ngokuzayo.
Ngemodeli yayo yokuqasha ukudla, i-The Atlantic isiza izinkampani ukuhlela indlela esicabanga ngayo ngohlelo lwethu lokudla. Lokho akuhambisani neze nokuzibophezela kwe-Atlantic ekufuneni "iqiniso."
Yonke imikhiqizo ebambe iqhaza kulo mcimbi waleli sonto “Ukuguqula Ukudla” - iFood Tank, iLand O'Lakes neNew Harvest, nayo - inika ikhava yeDowDuPont ukuthi iziveze njengompetha besayensi ngenkathi ihlela impikiswano yokudla ngobuchwepheshe obuthengisayo.
Kepha amaqiniso omlando abalulekile kunoma iyiphi ingxoxo eqotho ngekusasa, futhi iDowDuPont ayiyona iqhawe lesayensi.
Kokubili uDow noDupont banomlando omude we ukumboza isayensi, ukucindezela isayensi, ukuthengisa ngamabomu imikhiqizo eyingozi, ukumboza ukukhathazeka kwezempilo, ukwehluleka ukuhlanza ukumosheka kwabo, nokuzibandakanya amanye amahlazo, ubugebengu nokungalungi - noma yini edingekayo ukuvikela umugqa waphansi.
Ukuvikela imifudlana yenzuzo ethembekile, kunokuba uvuselele okungcono kakhulu kubantu nakwezemvelo, nakho kuzoshukumisela lezi zinkampani esikhathini esizayo.
I-GMO Pesticide Profit Treadmill
Ukuqonda ukuthi iDowDuPont nenye kanjani i-pesticide / imbewu mega-merger kungenzeka zithinte ikusasa lohlelo lwethu lokudla, bheka ukuthi lezi zinkampani zisebenzisa kanjani ubuchwepheshe bokudla obunelungelo lobunikazi njengamanje.
Ukudla okuningi kwe-GMO emakethe namuhla zenzelwe ukusetshenziswa ngezibulala-zinambuzane ezithile, okuholele ekutheni ukusetshenziswa okwandayo kwalezo zinambuzane, ukwanda kokhula kumelana nalezo zinambuzane, kanye nomzamo onamandla wokuthengisa izibulala-zinambuzane eziningi kakhulu ukulimaza amasimu epulazi ngaphesheya kweMidwest.
Ukuze uqonde ukuthi yini okudingeka iguquke ukuze ube nohlelo lokudla okunempilo, buza abalimi, hhayi iDowDuPont. Buza imiphakathi ukuthi ukulwela impilo yabo kanye nabo ilungelo lokwazi mayelana nezibulala-zinambuzane abaziphuzayo nabaphefumulayo.
EHawaii futhi Argentina, lapho izilimo ezakhiwe ngezakhi zofuzo zikhuliswa kakhulu, odokotela baphakamisa ukukhathazeka ngokwanda kokukhubazeka kokuzalwa nezinye izifo abasola ukuthi zihlobene nezibulala-zinambuzane. E-Iowa, omunye umkhiqizi ohamba phambili we-GMO, ukuhlinzekwa ngamanzi kungcoliswe ukugeleza kwamakhemikhali okuvela emapulazini ommbila nasezilwaneni.
Ikusasa lokudla kobuchwepheshe obuphakeme, ngaphansi kokuphathwa kwezinkampani ezinjengeDowDuPont ne-Elanco, kulula ukuqagela: okuningi kwalokho lezo zinkampani esezikuthengisa - imbewu eningi eyenziwe izakhi zofuzo ukuze iphile izibulala-zinambuzane, izibulala-zinambuzane eziningi, nezilwane zokudla ezenzelwe ukukhula ngokushesha futhi uvumelane kangcono nezimo eziminyene, nemithi yokusiza.
Izinkundla zemidiya ezithengiwe ezifana ne-Atlantic “ukudla okuguqukayo,” kanye nama-athikili nezimpikiswano mayelana "nekusasa lokudla" okwakunguSyngenta ngibanjwe ngithenga nje eLondon, futhi enye imboni eyimfihlo i-PR amaphrojekthi wokuqamba kabusha impikiswano ye-GMO, yimizamo yokuphazamisa amaqiniso omlando neqiniso elisekhona.
Abathengi abayithengi i-spin. Isidingo sokudla okuphilayo iyaqhubeka ukukhuphuka yonkana yonke imininingwane yabantu yomphakathi waseMelika.
Ukushintsha okuthandwa ngabathengi kunciphisa izinkampani ezinkulu zokudla njengama-icebergs futhi ukuhlukana imboni yezokudla inxenxa njengoba “izinkulungwane zeminyaka nomama befuna imikhiqizo enempilo futhi esobala.”
Masibanikeze abakufunayo: uhlelo lokudla olunempilo kubantu, abalimi, inhlabathi nezinyosi - uhlelo lokudla olubeka phambili ukuvikela ubuchopho bezingane zethu ngenzuzo yemboni yezibulala-zinambuzane.
Leyo yingxoxo esidinga ukuba nayo mayelana nokuguqula ukudla esikudlayo.
Incwadi eya ku-The Atlantic evela ku-Anne Frederick umqondisi we IHawaii Alliance Yezenzo Eziqhubekayo: "Umphakathi wethu uzame kaninginingi ukushaya imithetho ejwayelekile ezingeni lesifunda nakuhulumeni, kodwa uvinjezelwe yiDowDuPont kanye nemboni yezolimo ... Njengomfundi wencwadi yakho, kuyadumaza ukuthola ukuthi i-Atlantic izohambisana nomkhiqizo wayo imboni ebeke engcupheni impilo nokuphepha kwemiphakathi yethu. Ngiyethemba ukuthi nizoyibheka futhi uxhaso lweDowDuPont, futhi nime ngobumbano nemiphakathi yethu ephila phambili kulokhu kungabi nabulungisa kwemvelo. ”
Ufuna ukwazi izimfihlo eziningi izinkampani zokudla nezamakhemikhali ezifihlayo ngokudla kwethu? Bhalisela ilungelo lase-US lokwazi incwadi yezindaba lapha, futhi ongakwenza banikele lapha ukugcina uphenyo lwethu lupheka.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane I-Academy Yokudla Ne-Dietetics, Argentina, ICorteva Agriscience, Ubugebengu obuhambisana, DowDuPont, UDupont Pioneer, Elanco, Eli Lilly, abalimi, Ithangi Lokudla, I-GMO, Hawaii, zezempilo, Iowa, UJeff Simmons, Umhlaba O'Lakes, abezindaba, Isivuno Esisha, eziphilayo, izibulala-zinambuzane, Syngenta, Teflon, I-Atlantic